1 Samuel 20 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Samuel Nhoma a Edi Kan 20:1-42
Yonatan bataa Dawid ho denneennen (1-42)
20 Ɛnna Dawid guan fii Naiot wɔ Rama, na ɔbaa Yonatan nkyɛn bɛkae sɛ: “Dɛn na mayɛ?+ Me mfomso ne dɛn, na bɔne bɛn koraa na mayɛ wo papa a enti ɔrehwehwɛ me akum me?”* 2 Na Yonatan nso ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛmpare wo!+ Worenwu. Hwɛ! Me papa renyɛ biribiara, sɛ́ ɛyɛ ketewa anaa kɛse a ɔrenka ho asɛm nkyerɛ me. Adɛn nti na me papa de asɛm yi besie me? Ɛremma saa da.” 3 Nanso Dawid kaa ntam sɛ: “Wo papa nim sɛ wopɛ m’asɛm,+ enti ɔbɛka sɛ, ‘Mommma Yonatan nnte ho asɛm, anyɛ saa a, ne bo befuw.’ Sɛ́ Yehowa te ase na wo nso wote ase yi,* me ne owu ntam kwan nware koraa!”*+ 4 Ɛnna Yonatan ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Nea wobɛka* biara, mɛyɛ ama wo.” 5 Dawid ka kyerɛɛ Yonatan sɛ: “Ɔkyena yɛ ɔsram foforo,+ na ɛsɛ sɛ me ne ɔhene tena ase didi, nanso gya me kwan na memfa me ho nkosie wuram nkosi da a ɛto so abiɛsa no anwummere. 6 Sɛ wo papa hu sɛ minni hɔ a, ka sɛ, ‘Dawid srɛɛ me kwan sɛ ɔretu mmirika akɔ ne kurom Betlehem,+ efisɛ bere aso sɛ abusua no nyinaa bɔ afɔre a wɔbɔ no afe biara no.’+ 7 Sɛ ɔka sɛ, ‘Ɛnyɛ hwee’ a, ɛnde na ɛyɛ asomdwoe ma w’akoa. Na sɛ ne bo fuw a, ɛnde hu sɛ ɔpɛ sɛ odi me bɔne. 8 Da ɔdɔ a enni huammɔ adi kyerɛ w’akoa,+ efisɛ wo ne w’akoa ayɛ Yehowa apam.+ Nanso sɛ mayɛ bɔne a,+ wo ara kum me. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ wode me hyɛ wo papa nsa?” 9 Ɛnna Yonatan kae sɛ: “Ɛmpare me sɛ menya saa adwene no! Sɛ mihu sɛ me papa pɛ sɛ odi wo bɔne a, enti merenka nkyerɛ wo?”+ 10 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Yonatan sɛ: “Sɛ wo papa ka asɛmmɔne bi kyerɛ wo a, hena na ɔbɛbɔ me amanneɛ?” 11 Yonatan ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Wo de, bra ma yɛnkɔ wuram.” Enti wɔn baanu kɔɔ wuram. 12 Ɛnna Yonatan ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Yehowa, Israel Nyankopɔn nyɛ ɔdansefo sɛ, ɔkyena anaa ɔkyena akyi saa bere yi, me ne me papa bɛkasa ahu n’adwene, na sɛ ɔwɔ Dawid ho adwempa a, mɛsoma aba wo nkyɛn abeyi wo asotiw. 13 Nanso mihu sɛ me papa pɛ sɛ odi wo bɔne na manyi wo asotiw, na mamma woankɔ asomdwoe mu a, Yehowa ntua Yonatan ka na ɔmfa bi nka ho. Yehowa nni w’akyi+ sɛnea odii me papa akyi no.+ 14 Mete ase yi, kɔ so da Yehowa dɔ a enni huammɔ adi kyerɛ me, na miwu mpo a, yɛ saa ara.+ 15 Sɛ Yehowa pra Dawid atamfo a wɔwɔ asaase so nyinaa fi hɔ mpo a, nyi wo dɔ a enni huammɔ no mfi me fi da.”+ 16 Enti Yonatan ne Dawid fi yɛɛ apam, na ɔkae sɛ: “Ma Yehowa ntua Dawid atamfo so ka.” 17 Enti Yonatan maa Dawid san kaa ntam de kyerɛɛ ne dɔ, efisɛ na ɔdɔ no sɛ n’ankasa ne ho.*+ 18 Afei Yonatan ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔkyena yɛ ɔsram foforo,+ w’agua bɛda hɔ, enti obiara behu sɛ wunni hɔ. 19 Ɛda a ɛto so abiɛsa no, ani bɛba wo ho, enti bra faako a nnaano* wode wo ho siei no, na twɛn wɔ ɔbo yi ho. 20 Na mɛtow agyan abiɛsa afa ɔbo no fã baako te sɛ nea mede rebɔ biribi. 21 Sɛ mesoma ɔsomfo no a, mɛka akyerɛ no sɛ, ‘Kɔhwehwɛ agyan no.’ Sɛ meka kyerɛ ɔsomfo no sɛ, ‘Hwɛ! Agyan no wɔ ɔfã noho nti sesaw bra’ a, ɛnde bra, efisɛ sɛ́ Yehowa te ase yi, ɛkyerɛ sɛ asomdwoe wɔ hɔ, na bɔne biara rento wo. 22 Nanso sɛ meka kyerɛ abofra no sɛ, ‘Hwɛ! Agyan no wɔ akyiri noho’ a, ɛnde kɔ, efisɛ Yehowa pɛ sɛ wokɔ. 23 Na ɛbɔ a me ne wo baanu nyinaa ahyɛ yi,+ ma Yehowa nyɛ ɔdansefo wɔ me ne wo ntam nkosi daa.”+ 24 Enti Dawid kohintaw wuram hɔ. Bere a ɔsram foforo dui no, ɔhene tenaa n’agua so sɛ ɔrebedidi.+ 25 Ɔhene tenaa n’agua so wɔ ɔdan no ho sɛnea ɔyɛ daa no. Yonatan ne no dii nhwɛanim, na Abner+ nso tenaa Saul nkyɛn. Dawid de, na n’agua no da hɔ. 26 Saul anka hwee saa da no; mmom ɔkae wɔ ne tirim sɛ: ‘Gyama biribi nti ne ho ntew.+ Ampa, ɛbɛyɛ sɛ ne ho ntew.’ 27 Na da a ɛto so abien a ɛyɛ da a edi ɔsram foforo akyi no nso, ná Dawid agua no da hɔ. Enti Saul bisaa ne ba Yonatan sɛ: “Adɛn nti na nnɛra ne nnɛ nyinaa Yese+ ba no ammedidi?” 28 Ɛnna Yonatan buaa Saul sɛ: “Dawid srɛɛ kwan wɔ me hɔ sɛ ɔrekɔ Betlehem.+ 29 Ɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Mesrɛ wo, gya me kwan, efisɛ yɛrekɔbɔ abusua afɔre wɔ kurow no mu, na me nua afrɛ me sɛ memmra. Enti sɛ manya w’anim dom a, mesrɛ wo, ma memmɔ hwii nkɔ nkɔhwɛ me nuanom no.’ Eyi nti na wamma ɔhene pon ho yi.” 30 Saul bo fuw Yonatan paa, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Wo, ɔbea tuatewfo ba. Ɛyɛ wo sɛ minnim sɛ woakogyina Yese ba no afã de rehyɛ wo ne wo maame* aniwu anaa? 31 Bere a Yese ba no da so te ase wɔ asaase so yi, wo ne w’ahenni rentim da.+ Enti soma ma wɔnkɔfa no mmrɛ me, efisɛ ɔfata owu.”+ 32 Ɛnna Yonatan bisaa ne papa Saul sɛ: “Adɛn nti na ɛsɛ sɛ owu?+ Dɛn na wayɛ?” 33 Ɛnna Saul tow peaw sɛ ɔde rewɔ no,+ na ɛno maa Yonatan hui sɛ ne papa asi ne bo sɛ obekum Dawid.+ 34 Ɛhɔ ara na Yonatan de abufuw sɔre fii ɔpon no ho, na wannidi ɔsram foforo no da a ɛto so abien no, efisɛ Dawid asɛm no yɛɛ no yaw,+ na na ne papa agu n’anim ase. 35 Anɔpa no, Yonatan pue kɔɔ wuram sɛ ɔrekohyia Dawid sɛnea wɔhyehyɛe no, na na ɔsomfo kumaa bi ka ne ho.+ 36 Ɛnna ɔka kyerɛɛ ne somfo no sɛ: “Mesrɛ wo, tu mmirika kɔhwehwɛ agyan a merebɛtow no.” Na ɔsomfo no tuu mmirika, na Yonatan nso tow agyan no traa no. 37 Bere a ɔsomfo no koduu faako a Yonatan tow agyan no kogui no, Yonatan teɛɛm ka kyerɛɛ ɔsomfo no sɛ: “Ɛnyɛ w’anim noho na agyan no wɔ?” 38 Yonatan teɛɛm ka kyerɛɛ ɔsomfo no sɛ: “Ka wo ho! Ma wo ho nyɛ hare! Yɛ ntɛm sesaw bra!” Ɛnna Yonatan somfo no kɔsesaw agyan no, na ɔbaa ne wura nkyɛn. 39 Ɔsomfo no de, na onnim nea ɛrekɔ so; Yonatan ne Dawid nkutoo na na wɔte nea ɛrekɔ so no ase. 40 Ɛno akyi no, Yonatan de n’akode no maa ne somfo no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔ, fa kɔ kurow no mu.” 41 Bere a ɔsomfo no kɔe no, Dawid sɔre fii nkyɛn hɔ baabi wɔ anaafo fam bae. Ɛnna ɔde n’anim butuw fam, na ɔbɔɔ ne mu ase mprɛnsa. Obiara few ne yɔnko ano, na obiara suu ne yɔnko; Dawid na osui kɛse. 42 Na Yonatan ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Fa asomdwoe kɔ, efisɛ yɛn baanu nyinaa aka ntam+ wɔ Yehowa din mu sɛ, ‘Yehowa nyɛ ɔdansefo wɔ me ne wo ne m’asefo* ne w’asefo* ntam nkosi daa.’”+ Ɛnna Dawid sɔre siim kɔɔ ne kwan, na Yonatan san kɔɔ kurow no mu.
^ Anaa “ɔrehwehwɛ me kra.”
^ Anaa “wo kra te ase yi.”
^ Anaa “ɔnammɔn pɛ na ɛda me ne owu ntam.”
^ Anaa “Nea wo kra bɛka.”
^ Nt., “n’ankasa kra.”
^ Nt., “adwuma da no.”
^ Nt., “wo maame adagyaw.”
^ Nt., “m’aba.”